Malunga nathi -I-Hebei Chaoyue Umgangatho wokuQinisa okuQinisekisiweyo oMiselweyo Co., Ltd.
I-Hebei Chaoyue Standard Fastener Umngundo Co., Ltd. yasekwa ngo-2008,
ibekwe kwindawo yemizi zhaogeda yedolophu yase-beihan renqiu Hebei. Umenzi wesikhonkwane esikhethekileyo kunye nomyili wokuyila i-moulds. Ngotyalo-mali olupheleleyo lweedola ezi-5 ze-US, indawo egubungela umhlaba we-12800 m2, indawo yokusebenzela ye-7200 m2.Kufutshane neBeijing malunga ne-150KM, iTianjin malunga ne-100KM.
Ukunyaniseka, iitalente, umgangatho olungileyo, i-WIN-WIN, INKONZO YABASEBENZI, ukubambelela kwifilosofi yeshishini.Izinikezele ekuqiniseni ishishini kunye nokwanelisa bonke abathengi ngomgangatho olungileyo kunye nenkonzo ebalaseleyo.
Imigca yemveliso ixhotyiswe ngemeko yoomatshini bokugquma bePVD abaphambili abavela e-USA.
Ezinye izibonelelo ezihambelanayo ukudibanisa umgca wemveliso opheleleyo, njenge-lathes ye-CNC, i-grinder ezenzekelayo, i-cnc punch press, isitofu sokuqinisa isitya, kunye neminye imishini ye-CNC. ezinye izixhobo zokuvavanya, ukuqinisekisa umgangatho weemveliso.Sineqela elomeleleyo lobuchwephesha kunye neqela lolawulo, kwaye sisebenzise inkqubo yokuvelisa ikhompyuter, ukuphumeza ulawulo lweshishini lwanamhlanje.Sisebenzisa izibonelelo ze-softwares ezinje nge-CAD / CAM, Solidworks , Ukwenza ubuchwephesha obuphambili ziinjineli eziphezulu, iingcali zonyango olushushu kunye nabayili abayaziyo indlela.
Inkampani yeyona misebenzi iphambili kwi-R & D
Ukuveliswa kunye nokuthengiswa kwesihluzi se-header nge-TiAIN yokutyabeka nokwenza umngundo. Imigangatho ye-GB, i-JIS, i-ANSI, i-DIN, i-BS, i-ISO kunye nezitayile zentloko ezibandakanya iiPhillps, iSlot, iPozi, iHexagon, iTorx. Imveliso yonyaka ukuya kuthi ga kwisiqwenga se-2.5 sezigidi zokubetha kwinqanaba lesibini. Ngaphezu koko, sizama ukuqhubeka nobuchule bokuyila izinto ezintsha ukuze siphuhlise ukungunda okuthe kratya, kwaye siphumelele igama elihle kwintengiso, ngakumbi inqindi lesibini le-drywall screw, i-JDW 270F, umnyama omnyama we-12 * 25, ukuveliswa kwezikrufu malunga neziqwenga eziyi-150,000-180,000.
Iimveliso zethu zigubungela inqindi yesiBini, iMain die
Inqindi yokuqala, umsiki die, umsiki imela, Knock-out pin, Thread rolling die, Ukucheba die, ucingo ukuzoba die.All ngumngundo for drywall iqhosha lemenyu, iqhosha lemenyu chipborad, isikrufu umatshini, uthinte iqhosha lemenyu, ujije ngomthi, iqhosha lemenyu self zokomba, umshudo namandongomane . Ukongeza kwezi nkcazo ziqhelekileyo. Umngundo ongekho semgangathweni unokubonelelwa nangabathengi bokuzoba kunye nesicelo.
Khetha Chaoyue mould.We ngempumelelo ukunciphisa imiqobo kunye neendleko yokubumba kwimveliso yakho kunye noyilo.
Ukoneliseka kwakho kukusukela ngonaphakade kwabo bonke abasebenzi baseChaoyue, sikulungele ukuba liqabane lakho elithembekileyo kunye nomhlobo onyanisekileyo.